Timedatectl sy Hwclock: Mandidy hametraka ny daty sy ora amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Timedatectl sy Hwclock: Mandidy hametraka ny daty sy ny ora ao amin'ny Linux
Linux Post Install | | fampiharana, Tutorials / Manuals / Tips
Timedatectl sy Hwclock Mahasoa 2 izy ireo didy manitsy ny fotoana (daty sy ora), ao amin'ny Rafitra miasa GNU / Linux.
Imbetsaka rehefa mametraka sy mampiasa a Rafitra miasa GNU / Linux, ny sasany dia mety nahatsapa fa rehefa manomboka isaky ny mandeha, ny session ampiasain'ny mpampiasa amin'ny tontolon'ny sary na amin'ny alàlan'ny terminal, ny fotoana (daty sy ora) do Operating System an'ny solosaina miova (tsy mifanaraka). Amin'ny tranga hafa, matetika dia miova izany rehefa manana fanahafana ny baoty roa (baoty roa) ary ny fampiasana ny Rahavavy miasa napetraka.
Amin'ny tranga voalohany voalaza, izany hoe mampiasa fotsiny GNU / Linux, imbetsaka ny olana dia voavaha vetivety, izany hoe, tsy voavaha mazava tsara, manitsy ny rindranasa fanamafisana famataran'ora amin'ny alàlan'ny terminal mampiasa ny baiko "daty".
Amin'ny tranga faharoa, izany hoe mampiasa 2 na mihoatra Rafitra miasa tsy mitovy, mazàna GNU / Linux sy Windows, ny olana dia mazàna vahana vetivety amin'ny alàlan'ny fametrahana tanana ny fotoana manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny fotoana (daty sy ora) ny faharoa, ary amin'ny tranga sasany amin'ny fotoana Bios an'ny solosaina.
2 Didy Timedatectl sy Hwclock
El olana tsy mifanaraka amin'ny fotoana lainga, amin'ny làlan'ny Rafitra miasa GNU / Linux mandeha izy ireo ny daty sy ny ora. Izany hoe, amin'ny tsy itovizany amin'ny fomba fanodinany azy Rafitra miasa hafa tanteraka toa Windows, na dia eny toy ny hafa aza, toy ny MacOS.
En GNU / Linux na MacOS, ny lamina no ampiasaina UTC (Fotoana iraisana iraisana) hametraka ny ora mitovy, raha tsy ao amin'ny Windows. Windows mihevitra fa ny solosaina dia mitahiry ny ora marina sy nohavaozina ao amin'ny Famantaranandro fitaovana motherboard, izany hoe ao amin'ny Bios. Satria, ny Clock sy / na BIOS tsy maintsy soratanao ny fotoana laninao, na dia maty aza ny solosaina.
Noho izany, amin'ny alàlan'ny default, Windows mihevitra foana fa ny fotoana marina dia voatahiry ao amin'ny Ora eo an-toerana (Clock / BIOS) avy amin'ny solosaina, raha GNU / Linux, araka ny efa nambarantsika, dia mihevitra fa voatahiry ao amin'ny Ora UTC, izay mahatonga ny fe-potoana bisikileta voamarika rehefa mampiasa mifandimby ny 2. Noho izany, ny vahaolana lozika dia ny fanitsiana tsara ny Ora eo an-toerana (Clock / BIOS) avy amin'ny solosaina, ary amboary ny Rafitra miasa tsirairay mba hifandraisana aminy mba hampifanindriana ny fotoana haseho amin'ny mpampiasa.
Didy Timedatectl sy Hwclock
Misy ny baiko hamahana ity olana ity, izany hoe hamboarina izany GNU / Linux mifandray amin'ny fitaovana (Clock / BIOS) avy amin'ny solosainao ary ampifanarahana aminy, mankany asehoy ny mpampiasa miaraka amin'izay, toa anao koa Windows.
Alohan'ny hamonoana azy, ny fikirana marina an'ny fotoana (daty sy ora) ao amin'ny BiosAorian'ny fanatanterahana ny baiko dia tsara kokoa ny mamerina sy manamarina fa mijanona tsy miova izy io, ao amin'ny Rafitra miasa GNU / Linux ary avy eo ao amin'ny Bios.
Ireto baiko ireto dia:
Ity baiko maoderina ity dia manokana, ho an'ireo GNU / Distros Linux napetrak'izy ireo Systemd como el Dingana fanombohana 1 (PID 1), ohatra, DEBIAN GNU / Linux. Satria, io dia fiasa nomen'ity rafitra sy mpandrindra serivisy ity.
Mba hahatratrarana izany baiko izany dia avelao GNU / Linux mifandray amin'ny fitaovana (Clock / BIOS) avy amin'ny solosaina ary ampifanaraho aminy, ity baiko manaraka ity dia tsy maintsy atao:
sudo timedatectl set-local-rtc 1
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ity baiko ity, ny safidy «set-local-rtc [BOOL]»Ary ny hafa, momba DEBIAN GNU / Linux, azonao atao ny miditra amin'ilay Boky Torolàlana an-tserasera (fitantanana) ny fonosana sy ny baiko mitovy amin'izany, amin'ny manaraka rohy. Na vakio ny pejin'ny lehilahy eo an-toerana amin'ny fihazakazahana «man timedatectl".
Ity baiko malaza ary mbola misy ankehitriny ity, dia manokana ho an'ny karazana rehetra GNU / Distros Linux, satria tsy miankina amin'ny Systemd, na avy amin'ny rafi-pitantanana sy serivisy hafa.
Mba hahatratrarana izany baiko izany dia avelao ny Operating System GNU / Linux mifandray amin'ny fitaovana (Clock / BIOS) avy amin'ny solosaina ary ampifanaraho aminy, izany hoe ampifanaraho amin'ny BIOS ny ora mitovy aminy, tsy maintsy tanterahina ity baiko manaraka ity:
sudo hwclock -w o sudo hwclock --systohc
naoty: Ho an'ny tranga mifanohitra amin'izany, izany hoe raha toa ianao ka te handrindra amin'ny lasa (ampifanaraho amin'ny ora fiasa BIOS ny ora BIOS) dia azonao atao ny mampiasa ny baiko «hwclock -s»Na ny baiko «hwclock --hctosys«.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ity baiko ity, ny safidy «-w»Ary ny hafa momba DEBIAN GNU / Linux, azonao atao ny miditra amin'ilay Boky Torolàlana an-tserasera (fitantanana) ny fonosana sy ny baiko mitovy amin'izany, amin'ny manaraka rohy. Na vakio ny pejin'ny lehilahy eo an-toerana amin'ny fihazakazahana «man hwclock".
Manomboka izao, rehefa mitsahatra tsy mampiasa ny Drafitra UTC ho an'ny daty sy ora, izany hoe rehefa mampiasa ny fotoana (daty sy ora) do Bios for GNU / Linux na maromaro Rafitra miasa, hialana ny olana amin'ny fanamafisana ny fotoana misy ny fitaovana ary samy hanana fotoana mitovy foana ny rafitra roa, tsy misy lag.
Fomba hafa azo adika amin'ny fametrahana ny daty sy ny ora an'ny Rafitra miasa GNU / Linux ary ny fampitahana dia miaraka amin'ny Bios avy amin'ny solosaina, mampiasa ny baiko «date"Ary"hwclock»Ireto ve:
Manatanteraka baiko baiko avy amin'ny a root session hametraka ny daty 08:00 tamin'ny 07 martsa 2020.
date --set "2020-03-07 08:00"
hwclock --set --date="`date '+%D %H:%M:%S'`"
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Timedatectl y Hwclock», 2 mahasoa «Comandos de GNU/Linux» ampiasaina hametraka ny daty sy ora an'ny «Distros GNU/Linux», indrindra ny famahana ny olana amin'ny tsy fitovian'ny fotoana ao «ordenadores con doble booteo (inicio)», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Ary raha mila fanazavana fanampiny, aza misalasala mitsidika an'izay Tranomboky amin'ny Internet como el OpenLibra y JedIT mamaky boky (PDF) momba an'io lohahevitra io na ny hafa faritra fahalalana. Amin'izao fotoana izao, raha tianao izany «publicación», aza atsahatra ny fizarana azy miaraka amin'ny hafa, ao amin'ny Tranonkala, fantsona, vondrona na vondrom-piarahamonina ankafizina ny tambajotra sosialy, aleo malalaka sy misokatra ho Mastodon, na azo antoka sy tsy miankina toa telegrama.
Na tsidiho fotsiny ny pejin-tranonay ao amin'ny Avy amin'ny Linux na miditra amin'ny Channel ofisialy Telegram avy amin'ny FromLinux hamaky sy hifidy an'ity na boky hafa mahaliana amin'ny «Software Libre», «Código Abierto», «GNU/Linux» sy lohahevitra hafa mifandraika amin'ny «Informática y la Computación», ary ny «Actualidad tecnológica».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Timedatectl sy Hwclock: Mandidy hametraka ny daty sy ny ora ao amin'ny Linux
octavio dos santos dia hoy izy:
hace Taona 1
Salama! Misaotra betsaka, nanampy ahy ny vaovao, mampiasa kanelina manjaro aho ary tsy nanana fomba hikirakira sary, na ny fampifanarahana amin'ny Internet, tsy nanao fanovana tsotra fotsiny aho ... fa misaotra anao fa efa voavaha io 😀
Mamaly an'i octavio dos santos
Linux Post Install dia hoy izy:
Miarahaba anao Octavio! Faly aho fa nanompo anao tamim-pifaliana ity lahatsoratra ity. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara.
Fabian dia hoy izy:
raha ny amiko dia tsy maintsy novaiko / sns / adjtime ho 'LOCAL' fa tsy UTC 'satria ny Linux dia nanova ny ora bios ho UTC ary diso ny fandraisan'ny windows azy; amin'ny
hwclock – vervose
Afaka nanamarina aho fa tsy nanova azy intsony rehefa nanao io fanitsiana io
Valiny tamin'i Fabian
Miarahaba anao, Fabian. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara.
Tanisao ny kinova vaovao an'ny PowerDNS Recursor 4.3, mpizara DNS iray vahaolana
Bug izay avela hisoratra anarana fonenana phishing miaraka amina tarehintsoratra Unicode